Samsung Onya Galaxy Note 9 Na Big ihuenyo na Fortnite - News Ọchịchị
Samsung Onya Galaxy Note 9 Na Big ihuenyo na Fortnite
Top-nke na-nso gam akporo ama nwere ọhụrụ Bluetooth mkpịsị na ọgụgụ isi sọrọ igwefoto usoro na sọrọ aperture anya m
Isiokwu a na-akpọ “Samsung malite Galaxy Note 9 na nnukwu ihuenyo na Fortnite” e dere site Samuel Gibbs, maka theguardian.com on Thursday 9 August 2018 15.30 UTC
Samsung si ọhụrụ flagship gam akporo ama bụ arụpụtaghị-okowụk Galaxy Note 9: a ibu, ogologo na-adịgide adịgide version of ya mkpịsị-touting phablet.
Mara ọkwa na otu ihe mere na New York na Thursday, Cheta 9 yiri ikpeazụ afọ Note 8, replete na iko n'ihu na azụ, curved n'ọnụ na slide-esi S Pen mkpịsị.
The 6.4in Quad HD + Super AMOLED ihuenyo bụ ubé ibu karịa ikpeazụ afọ nlereanya. Ekwentị ahụ bụ ubé thicker na 9mm na arọ na 205g, nyere a budata ibu 4,000mAh batrị, nke Samsung kwuru kwesịrị inye ụbọchị niile batrị maka kpụ ọkụ n'ọnụ karịsịa nke ndị ọrụ.
"The Note kemgbe anyị ngosi maka adịchaghị technology na ụlọ ọrụ-akọwapụta ọhụrụ, na Galaxy Note 9 sokwa,"Kwuru DJ Koh, president na CEO nke IT na mobile nkwukọrịta nkewa maka Samsung. "Cheta Fans bụ Samsung kasị eguzosi ike n'ihe; anyị maara na ha chọrọ ka ọ na niile, iji nweta ọtụtụ ihe na-arụ ọrụ na play, na Galaxy Note 9 bụ naanị ekwentị na ike ịnọgide na ha ọrụ n'aka. "
The Note 9 ga-Samsung si octa-isi Samsung Exynos 9810 processor na UK ma ọ bụ ihe octa-isi Qualcomm Snapdragon 845 na US, na a oke nke ma 6 ma ọ bụ 8GB nke RAM, dabere na nchekwa variant. The ekwentị na-nwere Samsung mmiri jụrụ ngwọta enyere dissipate okpomọkụ si processor n'elu ogologo oge iji gbochie arụmọrụ tụlee metụtara na ekpo oke ọkụ.
The Note 9 ga-abụ otu n'ime ndị mbụ na gam akporo ngwaọrụ na-enwe ike na-agba ọsọ Epic si hugely ewu ewu ọtụtụ mbụ onye shooter Fortnite, na nanị ohere na beta nke egwuregwu n'ihi na a obere oge. The egwuregwu a dị na Apple si iOS ngwaọrụ kemgbe April, nakwa dị ka omenala consoles na kọmputa, na ga-emecha-abụ dị ozugbo via Epic si website n'ihi na ndị ọzọ gam akporo ngwaọrụ.
The ọhụrụ na mma S Pen mkpịsị, a n'ire ebe nke Cheta usoro, ugbu a ejikọ ekwentị via Bluetooth mere na ọ nwekwara ike-eji pụọ ngwaọrụ, maka rụọ ọrụ igwefoto shutter ma ọ bụ yiri. Ọ ka na-dabara neatly n'ime ala nke ekwentị, Otú ọ dị, na-abịa na a iche iche nke iche na agba dabere na agba nke ekwentị.
A sọrọ 12-megapixel igwefoto usoro kenha na na Samsung si Galaxy S9 +, tinyere ya agbanwe aperture oghere na a 2x ngwa anya mbugharị igwefoto, ndokwasa na azụ nke Cheta 9. New maka Note 9 bụ a nwere ọgụgụ isi igwefoto usoro nke na-eji Ai ịrụ ihe ude na ịchọpụta blinks, ịgwa onye ọrụ ozugbo ma ọ bụrụ na a shot bụ blurry ma ọ bụ ndị ọzọ nke.
N'okpuru ebe a na igwefoto bụ a repositioned akara mkpisiaka nyocha nke, dị ka Galaxy S9 +, bụ ugbu a ala ala azụ na mere kwesịrị ime ka ọ na a otutu mfe iji.
Laura Simeonova, onye na nyocha ekpuchi mobile phones na IoT maka CCS Insight, kwuru na mgbe Samsung si hardcore, -eguzosi ike n'ihe na-akwado isi maka Note ga-ahụ ọhụrụ atụmatụ dị ka na-adọrọ adọrọ "Samsung ga-nọgide na-atụnyere na egbe nke S9 Pọtụfoliyo na ebubo nke na-erughị underwhelming ndozi na gara aga ụdị.
"Ọ na-anọgide na-hụrụ ma ndị a ga-ezu iji na-adọta mmasị ndị na-anọghị na fiercely-eguzosi ike n'ihe Note ọrụ isi.
The Note 9 ga-enwe ike iji Samsung si gam akporo-on-a-na desktọọpụ mode na-akpọ DeX, dị ka na Korean ike nke ọzọ na-adịbeghị anya n'elu-ọgwụgwụ smartphones, ma na-enweghị tinye-na n'ọdụ ụgbọ mmiri, kama nanị ka a na a USB plugged n'ime ala nke ekwentị na n'ime a ileba anya.
Ekwentị ga-abịa na anọ na agba: nwa, acha anụnụ anụnụ na-acha odo odo. Ọ ga-ụgbọ mmiri na Android 8.1 Oreo, bụghị na nso nso tọhapụrụ Android 9 achịcha, na ya ga-abụ dị na ma 128GB nke nchekwa na-efu £ 899 ma ọ bụ na 512GB nke nchekwa maka £ 1.099. Nga iwu na-amalite taa na a ga na ụgbọ mmiri na 24 August.
"Ụfọdụ n'ime ọhụrụ atụmatụ dị otú ahụ dị ka ọhụrụ version of Dex jikọtara na S-Pen si n'ime ime obodo akara arụmọrụ maka n'ihu, ga-anọgide na-enwetaghị uche nke azụmahịa ọrụ na ụlọ ọrụ n'ofè Note ugbu n'ji isi,"Kwuru Simeonova. "The ngwaọrụ ga-abụ dị site 24 August, nke bụ na o yiri ka o nye ya ihe karịrị otu ọnwa tupu anyị ahụ ihe ọ bụla ọhụrụ iPhones ma ọ bụ ndị ọhụrụ Pixel ngwaọrụ site na Google slated maka October 2018. "
Samsung Galaxy Cheta 8 nyochaa: a kasị ukwuu wɔfrɛ wɔn T ngwugwu si nna mmiri chukwu nke phablets
14726	0 Samsung Galaxy Cheta 9
← Olee Otú M Ga-esi The Best Site Alexa? Olee otú Iji Dịghachi ehichapụ Photos Site gị gam akporo ekwentị? →